Esi gbanwee otu akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ onye njikwa na OS X | Esi m mac
Esi gbanwee otu akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ onye njikwa na OS X
Ụlọ Ignatius | | MacOS Sierra, Nkuzi
Ọ bụrụ na anyị ejirila Mac anyị mee ihe, ịnwe ihe karịrị otu akaụntụ enweghị isi ma ọ bụrụ na anyị ejiri Mac arụ ọrụ na ndụ ezinụlọ yana anyị achọghị ịgwakọta ọdịnaya ahụ. Ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ n'ụlọ na-adịkarị mkpa iji Mac, ụzọ kachasị mma iji ịnwe ọdịnaya niile ahaziri na -emepụta akaụntụ onye ọrụ nọọrọ onwe ha ka onye ọrụ ọ bụla nwee ọdịnaya ha iche. Ọkọlọtọ ọrụ ike ime ka mgbanwe usoro dị ka ha enweghị ike iwunye ngwa na-enweghị onye nchịkwa paswọọdụ.
Ọ bụrụ na anyị na-aga njem ma chọọ ịhapụ onye otu ezinụlọ anyị dịka onye nchịkwa, anyị nwere ike inye ha paswọọdụ anyị (anaghị atụ aro ya) ma ọ bụ tọghata akaụntụ ọkọlọtọ gị na akaụntụ nchịkwa, ọ bụrụ na onye ọrụ ọ bụla nwere nsogbu n'oge ụbọchị nke anyị na-agaghị anọ. Iji gbanwee otu akaụntụ ọkọlọtọ n'ime Onye nchịkwa otu, anyị nwere ụzọ abụọ, site na ọnụ ma ọ bụ site na menu ndị ọrụ na otu nhazi dị n'ime Mmasị Sistem.
1 Gbanwee akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ nchịkwa na OS X
1.1 Usoro 1 - Site na Mmasị Sistem
2 Usoro 2 - Site na ọnụ
Gbanwee akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ nchịkwa na OS X
Usoro 1 - Site na Mmasị Sistem
Mbụ anyị isi Mmasị sistemụ. Pịa na Ndị ọrụ na otu dị iche iche.
Ọzọ anyị na-aga na kọlụm dị n'aka ekpe ebe ndị ọrụ niile na-eji Mac dị na pịa akaụntụ anyị chọrọ ịghọ onye nchịkwa.
N’akụkụ aka nri nke mpio ahụ, igbe nke aha ya ga-egosi na ala Kwe ka onye ọrụ jikwaa kọmputa a. Anyị ga-elele igbe a iji gbanwee onye ọrụ na ajụjụ ka ọ bụrụ onye nchịkwa.
Ozugbo usoro a gwụchara anyị ga-Malitegharịa ekwentị ahụ na Mac ka mgbanwe gbanwere nke oma.
Usoro 2 - Site na ọnụ
Ozugbo anyị meghere Terminal ngwa anyị ga-ede iwu na-esonụ: dscl. -append / groups / admin GroupMembership Aha njirimara ebe USERNAME bu aha nnabata onye oru anyị chọrọ ịme onye nchịkwa.
Mgbe ahụ OS X ga-ajụ anyị maka paswọọdụ nchịkwa dị ugbu a ma gwa anyị na anyị ga-emerịrị ya bidogharịa usoro ka mgbanwe gbanwere nke oma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Esi gbanwee otu akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ onye njikwa na OS X
Apple ga-abata na Argentina dị ka "ụlọ ahịa na ụlọ ahịa"